ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ ည ၁၁ နာ၇ီ နောက်ဆုံးရ ရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းများ ~ Myanmar Express
ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ ည ၁၁ နာ၇ီ နောက်ဆုံးရ ရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းများ
From : ကိုစိုး
သပြေကုန်းကျေးရွာမှ ဓါးခုတ်ခံရသော ကျောင်းဆရာမလေး စစ်တွေစစ်ဆေးရုံသို့ရောက်ရှိပြီး ပြောပြချက်အရ သူ့ယောက်ကျား ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ယင်းကျောင်းရှေ့တွင် ဓါးထိုး၊ဓါးခုတ်ခံရပြီး သေဆုံးကျန်ခဲ့ပါသည်။ နောက်ရွာသားတစ်ယောက်ကို လည်လှီးသတ်နေသည်ကိုအဝေးမှ လှမ်းမြင်ခဲ့ရပါသည်။ နောက်တစ်ယောက်ကို ဓါတ်ဆီသွန်ပြီး မီးရှို့နေသည်ကို အဝေးတောင်ကုန်းမှ လှမ်းမြင်ကြရပါသည်။ သူမနှင့် အဖေါ်ကျောင်းဆရာမ နှစ်ဦး ထွက်ပြေးသဖြင့် လွတ်မြောက်လာကြပါသည်။ သူတို့ အိမ်ကို မီးမရှို့မှီ အိမ်အပေါ်သို့တက်ကြပြီး အိမ်ပေါ်မှ အဖိုးတန်ပစည်း များအားလုံးကို စိတ်ကြိုက်ယူပြီးမှ မီးရှီု့သည်ကို တောင်ကုန်းပေါ်မှ လှမ်းတွေ့ရပါသည်။ ဟု မျက်ရည်စက်လက်နှင့်ပြောပြသည်ကို ကြားရသူများ မျက်ရည်ကျကြရပါသည်။ ကျွန်တော်ရို့ ရခိုင်လူမျိုးများကို ဘယ်လိုကယ်တင်ကြပါမည်နည်း။
---ရမ်းဗြဲမြို့နယ်ကျောက်နီမော်ကျေးရွာအုပ်စု သပြေချောင်းကျေးရွာနေ မသီတာထွေးအား မုဒိမ်းကျင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့သူသုံးဦးအနက်မှ ၁ဦးဖြစ်သောထက်ထက်(ခ)ရော်ရှီးသည်ကျောက်ဖြူအကျဉ်းထောင်အတွင်းတွင် မိမိကိုယ်ကိုယ် ဆွဲကြိုးချအဆုံးစီရင်သွားကြောင်း သတင်းများထွက် ပေါ်လာသည်။
ထိုသတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကျောက်ဖြူအကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူထံ7Day News က နာရီပိုင်းအတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ "အခုမပြောချင်ဘူး။ နက်ဖြန်အစိုးရကထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်" ဟု သာပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ပြည်ပမီဒီယာ ဒေါ်စုကြည်အားအပြည့်အ၀ထောက်ခံနေတဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ(DVB) ကတော့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကပဲကုလားတွေနေအိမ်ကိုမီးရှို့ပီးရန်ကုန်မြို့မှဆန္ဒပြနေသလိုပုံစံနဲ့ရေးသားထားတာကိုေ
တွ့ရပါတယ်။မြန်မာမစစ်တဲ့ဒေါ်လာစားမီဒီယာသမားများဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြအပ်ပါတယ်။ Myanmar Express Posted in: သတင်း
10 June 2012 01:26
http://www.arakanlaywaddy.com/?p=1034မောင်တောမြို့အခြေနေ၏ လက်ရှိအဖြစ်ပျက်အား DVB မြန်မာ သတင်းဌာနမှ မှားယွင်းစွာ ပြောင်းပြန်လှန်ရေးနေသည်။http://www.arakanlaywaddy.com/?p=1034 မူလရေးသားထားသောhttp://burmese.dvb.no/archives/26511 ပြန်လည်ပြင်ရေးသားထားသောမအေလိုး DVB က ကောင်တွေ ပြောင်ကြီး နေဇော်နိုင်..မအေလိုးစောက်ရူးလေငန်းဆွဲနေတဲ့ သန်းဝင်းထွဋ်...မအေလိုးစောက်ရူးလူငယ့် အသံက စောက်ခြောက်..မအေလိုးစောက်ရူးအရက်သမား ဖုံးမြတ်..မအေလိုးစောက်ရူးစောက်ကျင့်တွေ အကုန်ပေါ်လာပြီ။ BBC နဲ့DVB ကတော့ ပြောင်းပြန်ရေးပြီးပြီhttp://www.arakanlaywaddy.com/?p=1034http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-18368556#TWEET156943ဧရာဝတီ၊ VOA / RFA တို့ က အောင်ဇော်တို အရက်သမားမအေလိုးလေးတွေ ရော ဘယ်လိုလာအုန်းမလဲမသိမွတ်ဆလင်များကို သုတ်သင်ကြ၊ အထူးသဖြင့် မွတ်ဆလင်ဧ။်ခွေးများ ကို သုတ်သင်ကြ၀၀ ၀၀ဒေါက်တာ လွမ်းဆွေ ဆိုတဲ့မအေလိုးလဲ မွတ်စလင်ခွေးပဲကွ။သွားဆဲကြပါအုန်း။ လွဏ်းဆွေဆိုတဲ့ ခွေးလိုးမသား၊ မွတ်စလင်ခွေးကို၊မွတ်စလင်မိုးသီးဇွန် က ထားပါတော့ မွတ်စလင်စစ်စစ်မို့ လို့ နာတာhttp://drlunswe.blogspot.com/2012/06/blog-post_10.html
အမေစု ..စောက်ရူးမ ကြီးအမေစု..စောက်ရူးမကြီးခင်ဗျားကြီး အသက် ၂၁ နှစ်လောက်မှာ ကတည်းက အင်္ဂလန် မှာကျောင်းသွားတက်နေတုန်း ကတည်း က မွတ်စလင်ကောင် က တက်လိုးတာ ကိုခံခဲ့မှန်း မသိခဲ့လို့ခင်ဗျားကြီးကို ကျုပ်တို့ ပြည်သူတွေ ကိုးကွယ်ခဲ့ တာ။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီး...လီး...လီး သမီးလားhttp://business-standard.com/india/news/much-warmth-some-restraint-at-manmohans-meetingsuu-kyi/475788/အခု မုဒိန်းကျင့် လည်လှီးအသတ်ခံရတဲ့ ရခိုင်မလေး ရဲ့ ကျန်ရစ်သူမိခင် မိသားစု ကို အားပေးစကား ၊ စာနာစကားတောင် မဆိုပဲ မွတ်ဆလင် ကောင်ကြီးတွေကို နို့ လှန်တိုက်ပြီး ချော့တော့ မလိုလုပ်နေတဲ့ ဒေါ်စု ခင်ဗျားကြီးကို မုန်းတယ်။ လီးပဲကိုကိုကြီးကို ပဲ ထောက်ခံတော့မယ်အမေစု ..စောက်ရူးမ ကြီး..အသက်၂၁နှစ် လောက်မှာ ကတည်း က မွတ်စလင်ကောင် က တက်လိုးခဲ့တဲ့ကောင်မကြီး ..စောက်ရူးမကြီးခင်ဗျားကြီး မောင်တောသွား၊ ခုချက်ချင်း မောင်တော သွားပြီး ခင်ဗျားကြီး ကို ပါကင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ မွတ်စလင်စောက်မျိုးတွေ ကို သွားဖျန်ဖြေလူနည်းစုလို့ ခင်ဗျားပြောတဲ့ ရန်ကုန် မန်းလေး က မွတ်စလင်တွေ အကုန်လုံးပါ ခေါ်သွား။မွတ်စလင်အချင်းချင်း ပေမဲ့ မတူဘူး ၊ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကျေးဇူးသိတယ်လို့ ဆိုရင် ရန်ကုန်၊ မန်းလေး က မွတ်စလင်တွေ ကို မောင်တော က မွတ်စလင်တွေကို ရင်ဆိုင်ခိုင်း ၊ သူတို့ အချင်းချင်း ချမယ်ထင်နေလား၊ မွတ်စလင် အချင်းချင်း ပေါင်းပြီး ခင်ဗျားကြီးဒေါ်စုကို ဖင်လိုးသတ်ပြီးမှ ကျုပ်တို့ မြန်မာ တွေ ခင်ဗျား အလောင်းကို မောင်တော မှာ လာကောက်မယ်။အစွန်းရောက်မွတ်စလင်ဆို တာ မွတ်စလင်လူဦးရေ ၅၀% စွန်းသွားလို့ ၊ ကျော်သွားလို့၊ အချိန်တန်သွားလို့ ၊ အစွန်းရောက် မွတ်စလင်လို့ ခေါ်တာအလယ်အလတ် မွတ်စလင်ဆို တာ မွတ်စလင်လူဦးရေ ၅၀% မရောက်သေးလို့ ၊ မွတ်စလင်လူဦးရေ အလယ်အလတ်ပဲရှိသေးလို့ ၊ အချိန်မတန်သေးလို့ အလယ်အလတ်မွတ်စလင်လို့ ခေါ်တာခင်ဗျားကြီး ဒီအသက်၊ ဒီအရွယ်၊ ဒီဦးနှောက်ကြီးနဲ့ ဒါတွေကို မသိနားမလည် ဘူးဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးအမေစု ..စောက်ရူးမ ကြီး ဟုတ်တယ်။ ကျုပ်တို့ မြန်မာတွေက ပြန်လည်းမလုပ်ရဘူး၊ ကျန်တဲ့ တာမွေတို့ သံတွဲတို့ က မွတ်စလင်တွေကို ၉၅% ပြည့်တဲ့ အထိကို ထိုင်စောင့်။မွတ်စလင်တွေ ၉၅% အထိ လူပွားပြီးမှ ကျုပ်တို့ မြန်မာတွေ ဘာလုပ်ရမှာလဲ ..ဖင်ခံရမှာလား။နောက်တစ်ခါ မွတ်ဆလင်တွေ မီးရှို့မဲ့ စေတီ ဟာဆူးလေ စေတီပဲ ..မပြောမရှိနဲ့ ။လောလောဆယ်တော့ ရန်ကုန်နဲ့ မန်းလေးမှာ မွတ်စလင်တွေ ၆၀% လောက် ရောက်တဲ့ အထိလွှတ်ပေးထားလိုက် အုန်း။ ပြီးမှ ဖင်ခံလိုက်
10 June 2012 02:36
DVB & BBC ကိုယ့်အမေကိုယ် လိုးတဲ့ကောင်တွေ,ထမင်းဝလို့လီးတောင်နေတာ။ ကုလား က ဖင်ပြန်လိုး မှ ပါးစပ် က ချီးပါ ထွက်နေ ဦးမယ်
10 June 2012 07:53
စောက်ရူးကြီးငမိုးသီး ကသူ့ ချီ့းblogမှာ "အမေရိကန် နိင်ငံတွင် နိင်ငံခြားသားများဝင်ခြင်တိုင်းဝင်လို့ မရပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဥပဒေရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။"တဲ့။..တရားမဝင်ခိုးနေသူ ၂၀၁၂မှာ အမေရိကန်မှာ၁၂သန်း ရှိတာခွေးလိုးမသားတွေ ၆တန်းမအောင်လို့ မသိတာဖြစ်မယ်။ စာသင်ပြီးမှဒီဒါလေးဖတ်ကြည့်အုန်း။ There are 12 million undocumented immigrants living in America.Read more: http://www.businessinsider.com/illegal-immigrants-living-in-the-us-2012-4
good comments..အခု မုဒိန်းကျင့် လည်လှီးအသတ်ခံရတဲ့ ရခိုင်မလေး ရဲ့ ကျန်ရစ်သူမိခင် မိသားစု ကို အားပေးစကား ၊ စာနာစကားတောင် မဆိုပဲ မွတ်ဆလင် ကောင်ကြီးတွေကို နို့ လှန်တိုက်ပြီး ချော့တော့ မလိုလုပ်နေတဲ့ ဒေါ်စု To Myanmar Express.. Please distribute this asap.
ကျွန်တော် ဗမာလူမျိုးပါ။ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအစော်ကားခံနေရပါပြီ။မဖိတ်ခေါ်ပဲနဲ့လာတဲ့ဧည့်သည်များက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကို စော်ကားနေပါပြီ။မောင်းထုတ်နေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်မှန်တယ်ဆိုရင် လက်သည်းဆိတ် လက်ထိတ်နာရပါမယ်။ကိုယ့်နှမလေးသာ မွတ်ဆလင်ကုလားက မုဒိန်းကျင့်သွားရင် ဆိုတဲ့အတွေးမျိုး ရြွှေပည်အေး တရားဟောနေတဲ့သူတွေ စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ။ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ပါ။ဒီပြသနာတွေ လျော့ပါးသွားအောင်၊ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ မွတ်ဆလင် တွေ ဗုံးခွဲတာမျိုးတွေ အထိ၊ဖြစ်မလာခင် တားဆီးရတော့မှာပါ။(သင်္ကြန်မှာ ဗုံးခွဲတာ ကုလားလို့ကြားမိပါတယ်။)ရခိုင် ပြည်နယ်ကနေ ဘင်္ဂါလီပြည်နယ်ဖြစ်သွားပါတော့မယ်။ပြီးရင်တစ်နိုင်ငံလုံးကို ဆက်မြိုပါလိမ့်မယ်။ဒေါက်တာအေးမောင်ခင်ဗျား၊လွှတ်တော်မှာ နယ်စပ်ဒေသတွင်ရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကို အကာအကွယ်ပေးမဲ့ ဥပဒေ တင်သွင်းသင့်ပါပြီ။သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ရင် ကုလားတွေ အခွင့်အရေး ယူလာနိုင် တွေ ကြိုတင်ကာကွယ်သင့်ပါပြီ။နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးရင် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေပါ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့မျိုးနဲ့ထုတ်ပေးသင့်ပါတယ်။အမေစု ဆီလဲ သွားပြီ ငိုပြလိုက်ပါအုံး။ကုလားတွေကတော့ အရင်ငိုပြ ပြီးနေပါပြီ။ဦးကိုကိုကြီးတစ်ယောက်ပဲ ၈၈မျိုးဆက်မှာ တိုင်းရင်းသားပဲထင်တယ်။ကျန်တာတွေ အကုန်လုံးကုလားတွေပဲထင်တယ်။ဖယောင်းတိုင် ခောစငေါည တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် လုပ်ပါအုံး။ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ရခိုင်လူမျိုးတွေ စီတန်းလှည့်လည်တော့ ၈၈မျိုးဆက်တစ်ယောက်မှ မတွေ့ပါလား။၈၈မျိုးဆက် ကုလားမြအေး ကတော့ ခင်ဗျားတို့ထက် ပိုသာတယ်။
13 June 2012 04:08